စီးပွားရေးဝဘ်ဆိုက် - Aerial Yangon
ယနေ့သည် Social Network ခေတ်ဖြစ်သည်.အတွက် လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် Web Page များလိုအပ်လာပါသည်။ Website တစ်ခုဟာ လူကြီးမင်း၏ရှိပြီးသားဖောက်သည်များကို ထိန်သိမ်းထားနိုင်ပြီး Customers အသစ်တွေရရှိနိုင်လာပါသည်။ Web Development နည်းပညာဆိုသည်မှာ online မှတစ်ဆင်. Customers များဆီသို့ Information အစုံအလင်ပေးပို့နိုင်သည်.အပြင် ကိုယ်.ရဲ့ Customer တွေ ၂၄ နာရီလုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ဝန်ထမ်းမလိုဘဲ အချိန်နဲ့အမျှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စေပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အချိန်မကုန်လူမပင်ပန်းဘဲ ၂၄ လုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော Website ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုပါက Aerial Yangon နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ။ Web Page များဖြင်. လုပ်ငန်းကို နာရီပိုင်းအတွင်း Customer များ၏ယုံကြည်မှုပိုမိုရရှိစေပြီး သတင်းအချက်အလက်များအား တစ်စုတစ်စည်းတည်းပေးစွမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်သော Website များကို အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော ကျွန်တော်တို့ Aerial Yangon မှ အသင်.ရှိနေပါတယ် ။
စျေးနှုံန်းချိုသာပြီး အချိန်တိုအတွင်း ရရှိနိုင်ခြင်း။
Device အားလုံးအတွက် (Mobile, Tablet, PC) အံဝင်ခွင်ကျ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
Web application တစ်ခုလိုအပ်ပါက Free ထည့်ဆွဲပေးခြင်း။
ကုမ္ပဏီနာမည်ဖြင့် Web mail (info@yourcompany.com) များဖွင့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
Website လုံခြုံမှုအတွက် Free SSL ခံထားပေးခြင်း။
လူကြီးမင်းတို့ Business အား Google ပေါ်တွင် အလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်စေရန် Search Engine Optimization အား Free ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
လူကြီးမင်းတို့ Website Traffic အားအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်စေရန် Google Analytics Tools အသုံးပြုထားခြင်း။
လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော Update Data များအား မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လွယ်လင့်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာပြီး နေရာဒေသမရွေး ၊ဝန်ထမ်းအင်အားမလို ၊အချိန်အကန့်အသတ်မရှိပဲ Website ပေါ်တွင် အမြဲမပြတ် မိမိလုပ်ငန်းကို ကြော်ငြာပေးနိုင်ခြင်း၊၊
Business Website လုပ်ထားခြင်းဖြင့် မိမိ၏ ကုမ္ပဏီကို ၂၄ နာရီ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးပါတနာများ ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း။
လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရန်အတွက်ဖြစ်စေ ၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်စေ Market research ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း Websiteပေါ်အခြေခံပြီး dataများစုဆောင်ထားနိုင်ခြင်း၊
Google ပေါ်တွင် မိမိ၏ကုမ္ပဏီနာမည်ကို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်၍ အများထက်အခွင့်အလမ်းပိုသာခြင်း။
Websiteတစ်ခုတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြင့် မိမိ၏လုပ်ငန်းအပေါ်ဘယ်လောက်ထိယုံကြည်အားထားနိုင်ကြောင်းကို အသေးစိတ်ဖော်ပြခွင့်ရပြီး ပါတနာများ၊ Customer များအနေဖြင့် ယုံကြည်အလေးထားမှု ၊ ယုံကြည်မှုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိစေခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိနိုင်စေမည်။
Business Website တစ်ခုကို ၃ သိန်း ခွဲ ကျပ်ဖြင်. အခုပဲစလုပ်လိုက်ပါ။
Business Website Package Plan
(.com) (.com,.net,.org) (.com,.net,.org) (.com,.net,.org)
Number of Web Page
8 15 30 Unlimited
No 20 (info@yourcompany.com) 20 (info@yourcompany.com) 1000 (info@yourcompany.com)
Word Press Word Press Word Press Word Press
Static Page CMS CMS CMS
Using Our Template Using Our Create Template Customize Template Customize Template
All Device (Mobile, Tablet, Desktop, Laptop) All Device (Mobile, Tablet, Desktop, Laptop) All Device (Mobile, Tablet, Desktop, Laptop) All Device (Mobile, Tablet, Desktop, Laptop)
Form Mail System
No No Yes (Email Contact Form, Survey Form, Reservation Form) Yes (Email Contact Form, Survey Form, Reservation Form)
1 New Banner Design3New Banner Design3New Banner Design5New Banner Design
No SEO, Social Network Integration facebook, instegram, Etc.,Location Map SEO, Social Network Integration facebook, instegram, Etc.,Location Map SEO, Social Network Integration facebook, instegram, Etc.,Location Map
No Free 1 year (2 Time) Free 1 year (2 Time) Free 1 year (3 Time)
3 or4Days 1 or2weeks2or3weeks4or5weeks
Annual Fee for first year
350,000 MMK Click Request Quotation Click Request Quotation Click Request Quotation
*Customer စိတ်ကြိုက် Functions များထပ်တိုးပြီး စျေးနှုံန်းသင့်တင့်စွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်သည်။